मोदी भ्रमणमा यति धेरै खर्च कसरी ? - samayapost.com
मोदी भ्रमणमा यति धेरै खर्च कसरी ?
समयपोष्ट २०७५ साउन ८ गते २:२०
सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा सवा ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आजको कारोबारमा खबर छ, आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सरकारको प्रतिवद्धताविपरित अर्थ मन्त्रालयले मोदी भ्रमण व्यवस्थापनका क्रममा करिब ३० घण्टाको खर्च विभिन्न ९ वटा निकायलाई ६ करोड ३३ लाख ७३ हजार २ सय ७७ रुपैयाँ निकासा दिएको हो ।
वैशाख २८ गते बिहारको राजधानी पटनाबाट जानकी मन्दिर हुँदै काठमाडौं आएका मोदी वैशाख २९ गते नै स्वदेश फिर्ता भएका थिए ।
बहालवाला तथा पूर्व प्रशासकहरु नै यत्रो खर्च अस्वभाविक भएको बताउँछन् । एक सचिव भन्छन्, ‘एकतातिर खर्चमा आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता भन्ने अर्कातिर अस्वभाविक बिलभुक्तानी अर्थबाटै स्वीकृति गर्नेकुरा पटक्कै सुहाएन ।’